एडिबीले जलविद्युत् कम्पनीलाई ५ अर्ब सहयाेग दिने - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
एडिबीले जलविद्युत् कम्पनीलाई ५ अर्ब सहयाेग दिने
पुष १८, २०७४ 2607 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
पुँजी विस्तार गर्दै ठूला आयोजनामा लगानी गर्न एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीलाई ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब रुपैयाँ) ‘लाइन अफ क्रेडिट’ (सहयाेग) दिने भएको छ ।
उक्त रकम विशेषतः ठूला आयोजना र स्वपुँजीमा लगानी हुनेछ । अनुदानका विषयमा एडिबीसँग सैद्धान्तिक सहमित भइसकेको कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक मुक्तिबोध न्यौपानेले बताए ।
‘सरकार र एडिबीको सर्तअनुसार निर्देशिका तयार भइसकेको छ,’ उनले भने, सन् २०१८ को मध्यबाट अनुदान निकासा तथा कार्यान्वयन हुनेछ ।’ अहिले सञ्चालित वा योजनामा रहेका जुनसुकै आयोजनामा उक्त रकम लगानी गर्न मिल्ने पनि न्यौपानेले बताए ।
एडिबीले वातावरण तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने असर न्यूनिकरणमा विशेष चासो राख्ने गर्छ । यी क्षेत्रका समस्या समाधान तथा न्यूनिकरण गर्दै जार्नुपर्ने विषयलाई पनि एडिबीले जोड दिएको छ । अधिकांश उसकै मापदण्डमा तयार भएकाले निर्देशिकाको दायराभित्र पर्ने हरेक आयोजनामा रकम परिचालन हुन सक्छ ।
कम्पनीले दर्जन बढी आयोजनामा ऋण र आधा दर्जन सरकारी निकायमा स्वपुँजी लगानी गरेको छ । रकम परिचालन बढ्दै गएकाले कम्पनीमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुन थालेको छ । यही कारण एडिबीसँग अनुदानको प्रक्रिया थालिएको हो ।
अहिलेसम्म कम्पनीले ५ सय ४१ मेगावाटका आयोजनामा ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । यस्तै, ५ सरकारी निकायमा ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको स्वपुँजी लगानी गरेको छ ।
न्यौपानेका अनुसार कम्पनीले ऋण लगानी गरेका आयोजनामा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । विभिन्न आयोजनामा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यद्यपि, कम्पनीसँग अहिले साढे ९ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात छ ।